“အတွေးစလေးတွေ”: စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံး ပန်းငါးမျိုး . . .
ရနံ့သင်းပျံ့ပျံ့နဲ့ မျက်စိပသာဒရှိရှိ အရာဝထ္ထုကိုပဲ မျက်စိထဲမှာ သွားမြင်နေကျပါ။ ဒါပေမယ့် ရှာရှာဖွေဖွေလုပ်နိုင်လွန်းတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များကြောင့် မြင်ဖူးနေကျပန်းနဲ့ အသွင်ရော၊ အနံ့ပါလားလားမှမတူအောင် ခြားနားလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာ့စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးပန်းတွေကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Carrion flowers (မသာပန်းများ)
Carrion ပန်း(မသာပန်း)တွေကတော့ ပန်းလို့အများက သတ်မှတ်လက်ခံထားတဲ့အရာတွေနဲ့ လုံးဝကို ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှာဝမှာ ချစ်မြတ်နိုးစရာကောင်းတဲ့ သင်းသင်းပျံ့ပျံ့ရနံ့တွေ ထုတ်ပေးမယ့်အစား အန်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုးဝါးလွန်းတဲ့ အသားပုပ်နံ့ပုပ်အဲ့အဲ့ကိုသာ ပေးပါတယ်။ ဒီစိတ်ပျက်စရာပန်းပွင့်ဟာ ရနံ့မွှေးတဲ့အခြားပန်းတွေလိုပဲ ၀တ်မှုန်တွေဘာတွေကူးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပန်းရဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းမှာ ဇီဝပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပြီး အသားစားတဲ့ ယင်ကောင်တွေနဲ့ ပျားတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ ပုပ်အဲ့အဲ့အနံ့ကိုသာ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီအနံ့ဟာ ပန်းပွင့်မှာပါတဲ့ putrecine နဲ့ cadaverine အဆီတွေပြိုကွဲရာကနေ ထွက်လာတာပါ။
အထက်ပါ စိတ်ပျက်စရာကောင်းလှတဲ့ မသာပန်းအုပ်စုဝင် ပန်းငါးမျိုးကို နောက်ပြန်ရေတွက်ထားပါတယ်။ ခံစားကြည့်ပါဦး။
5. Dead Horse Arum Lily
အထက်မှာပြထားတဲ့ပန်းကတော့ အနံ့ဆိုးလွန်းလှတဲ့ Helicodiceros muscivorus
ပန်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။carrion ပန်းမျိုးတွေလိုပဲ အခံရဆိုးလွန်းလှတဲ့ အသားပုပ်နံ့ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခြားဂုဏ်သတ္တိတစ်မျိုးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ပါသေးတယ်။ ယင်ကောင်တွေ သူ့ရဲ့ဝတ်မှုန်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင် ဆွဲဆောင်မှုအဖြစ် thermogenesis တွေကိုသုံးပြီး အပူချိန်တိုးမြင့်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
4. Arum dioscoridis
ဒီ Arum dioscoridis ပန်းကလည်း အခြားပန်းတွေလိုပဲ အသားပုပ်နံ့ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ပန်းရဲ့အတွင်းသားမှာပါတဲ့ အရောင်ရင့်ရင့်အစက်အပြောက်တွေက ပျက်စီးနေတဲ့ အသားပုပ်နဲ့တူနေခြင်းပါပဲ။ နီနီရဲရဲအရောင်ရှိတဲ့ ဒီအစက်တွေဟာ အသားပုပ်နဲ့တူပြီး ပုပ်သိုးတဲ့အနံ့နဲ့တွဲလို့ သားကောင်တွေကို ဆွဲဆောင်ပါတယ်။
3. The Corpse Flower
အထက်မှာပြထားတဲ့ပုံကတော့ မှော်တိုင်းပြည်က လာတယ်လို့တောင် ထင်စရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပန်းကတော့ တကယ့်ပန်းအစစ်ပါ။ Titan Arum လို့လည်းခေါ်နိုင်တဲ့ ဒီအလောင်းကောင်ပန်း Amorphophallus titanum ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အကြီးဆုံးပန်းပွင့်တွေထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါပန်းဟာ အမှန်တကယ်ပဲ ပွင့်လည်းပွင့်ပြီး အချိန်တန်ရင် ညှိုးနွမ်းပျက်စီးသလို ရွက်သစ်တွေလည်း ဝေနိုင်ပါတယ်။ မျက်လှည့်ဆန်လှတဲ့ဒီပန်းဟာ ပွင့်ဖို့အတွက် အချိန်၆နှစ်တိတိယူရပြီး ပွင့်တာနဲ့တပြိုင်တည်း ကမ္ဘာကြီးကို အနံ့နဲ့ ဒုက္ခပေးတော့တာပါပဲ။ ဒီပွင့်တဲ့အဆင့်မှာ ပန်းပွင့်ရဲ့ရိုးတံအပူချိန်ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်နဲ့ ထပ်တူနီးပါးရှိပါတယ်။ ဒီပန်းပွင့်တဲ့အချိန်မှာ အနားကိုရောက်သွားတဲ့လူကတော့ အသက်အောင့်ထားရလောက်အောင် အနံ့ဆိုးလှတဲ့ တကယ့်စိတ်ပျက်စရာပန်းဖြစ်ပါတယ်။
The Dragon Arum, the Black Arum နဲ့ Voodoo Lily လို့လူသိများတဲ့ ဒီပန်းဟာ စိတ်ပျက်စရာ အနံ့ကလွဲရင်တော့ အတော့်ကိုလှတဲ့ပန်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခမ်းနားလှတဲ့ ပန်းရင့်ရောင်ဒီပန်းဟာ ပန်းရဲ့ဗဟိုကနေထွက်တဲ့ မရမ်းရောင်ဝတ်ဆံတိုင်ရှိပြီး Halloween ပွဲတော်မှာဝတ်တဲ့ ၀တ်စုံနဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်ချင်းတော်တော်ဆင်ပါတယ်။ ၀တ်ဆံတိုင်မှာ မရမ်းရောင်နဲ့ အနီရောင်တွေစွန်းထင်နေတာက သွေးစက်တွေပျံ့ကြဲနေတာနဲ့တောင် တူနေပါသေးတယ်။ ပန်းပွင့်ရဲ့ဗဟိုကတော့ ၀တ်မှုန်ကူးဖို့ကူညီပေးမယ့် ယင်ကောင်တွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ အပုပ်နံ့ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနံ့ကတော့ လူသေကောင်ပုပ်အနံ့နဲ့တကယ့်ကိုတူပြီး တသက်မေ့လို့ရမှာတောင် မဟုတ်ပါ။
Rafflesia ပန်းကတော့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ပန်းဖြစ်ပြီး မျိုးစိတ်ပေါင်း ၂၇ခုရှိတဲ့ ကပ်ပါးပန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပန်းဟာ တွားသွားနွယ်ပင်တွေပေါ်မှာ ပေါက်ရောက်လေ့ရှိပြီး အဲဒီအပင်တွေထဲမှာ ရှင်သန်ကြီးထွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပန်းပင်တစ်ပင်လုံးဟာ ပန်းပွင့်ဖြစ်နေပြီး အမြစ်မရှိတာကိုလည်း တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အလောင်းကောင်ပန်းလို့လည်း ခေါ်ကြတဲ့ ဒီပန်းဟာ Titan Arum နဲ့စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိချင်းဆင်ပေမယ့် လုံးလုံးလျားလျားတော့လည်း မတူပါ။ ဒါပေမယ့် စားနေတဲ့ထမင်းပွဲကို ပစ်ချပြီးထွက်ပြေးချင်စိတ်ပေါက်လောက်တဲ့ အနံ့ကတော့ စံတင်လောက်ပါတယ်။
မသာပန်းလို့ပဲခေါ်ခေါ်၊ လူသေပုပ်ပန်းလို့ပဲခေါ်ခေါ်၊ အလောင်းကောင်ပန်းလို့ပဲခေါ်ခေါ်
ဒီပန်းတွေဟာ သဘာဝအားဖြင့် အပုပ်အဆွေးတွေကို ကြိုက်တတ်တဲ့ ယင်တွေကိုဆွဲဆောင်ပြီး သူတို့ကိုဝတ်မှုန်ကူးပေးအောင်တော့ ကောင်းကောင်းလှည့်ဖျားနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညဘက်တွေမှာ အလောင်းကောင်ကထွက်တဲ့ ပုပ်အဲ့အဲ့ အနံ့ဆိုးကြီးတွေနဲ့ အိပ်ရာကနေလန့်မနိုးချင်ရင်တော့ အထက်ကပန်းမျိုးတွေကို ကိုယ့်ပန်းခြံထဲမှာ မစိုက်မိဖို့တော့ အကြံပေးချင်ပါရဲ့။
Posted by Han Kyi at 3:20:00 am